Usman Ghani, Author at Shop
On Valentine’s Day, most of the couples give their loved ones bouquets, dolls, and chocolates …
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အွန်လိုင်းစျေးဝယ်ခြင်းကိုဦးဆောင်နေတဲ့ Shop.com.mm ဟာ မယုံနိုင်လောက်တဲ့လျှော့စျေးတွေ၊ သီးသန့်ကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့ Shop Anniversary ကိုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ 2020 Shop Anniversary ပွဲတော်ကြီးနဲ့ 9.9 Super Sale ပွဲတော်ကြီးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ …
12.12 sale 2020 hasalot of products, so did you already put your favorites …
In the coming 12.12 2020 World’s Biggest Sale, it includesalot of events to …
Others Shop Event
12.12 sale 2020 စျေးရောင်းပွဲတော်မှာဆိုရင် ကုန်ပစ္စည်းပေါင်းများစွာပါဝင်တဲ့အတွက် ဘာတွေဝယ်ယူချင်လဲဆိုတာကိုရော သင့်ရဲ့ Wishlist ထဲမှာထည့်ထားပြီးပြီလား? မထည့်ထားရသေးဖူးဆိုရင်တော့ စျေးပွဲတော်နေ့ကတဖြည်းဖြည်းနီးကပ်လာပြီဆိုတော့ မြန်မြန်တော့ထည့်ထားမှရမယ်နော်။ ဒါမှ မိမိဝယ်ယူချင်တဲ့ ပစ္စည်းတွေရဲ့ …
၂၀၂၀၊ ၁၂.၁၂ ကမ္ဘာအကြီးမားဆုံးစျေးရောင်းပွဲတော်အတွက် လျှော့စျေးကူပွန်တွေကိုရယူဖို့အတွက် ဘယ်နည်းလမ်းတွေကအလွယ်ကူဆုံးဖြစ်မလဲ?
လာမည့် 12-12 sale 2020 ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးစျေးရောင်းပွဲတော်မှာဆိုရင် ၉.၉၊၁၀.၁၀ စျေးရောင်းပွဲတွေကလိုပဲ လျှော့စျေးကူပွန်တွေရရှိနိုင်မည့် အစီအစဉ်ကောင်းများစွာပါဝင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် များသောအားဖြင့် ကတော့ လျှော့စျေးကူပွန်တွေရှိတာသိပေမယ့် ဘယ်လိုရယူရမလဲ ဆိုတာမသိလိုက်တာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ …
၂၀၂၀၊ ၁၂.၁၂ ကမ္ဘာအကြီးဆုံးစျေးရောင်းပွဲတော်ကြီးဆိုတာဘာလဲ?
၂၀၂၀ နို၀င်ဘာလတွင် Shopဟာ တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ အကြီးမားဆုံးနှင့်မယုံနိုင်လောက်အောင်ရောင်းအားအကောင်းဆုံးဖြစ်သည့် ၂၀၂၀၊ ၁၂.၁၂ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးစျေးရောင်းပွဲတော်ကြီး ကို ကျင်းပပြုလုပ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဒီစျေးရောင်းပွဲတော်ကြီးကို ကျင်းပလာခဲ့တာဆိုရင် ဒီနှစ်မှာတော့ သုံးကြိမ်မြောက်ကျင်းပပြုလုပ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ 12 …
What is 12.12 The World’s Biggest Sale 2020?
In November 2020, Shop will hold the largest and most incredible sale in the world. …
What should you buy in 11.11 Biggest Sale 2020?
Shop MM is hosting the biggest, most incredible 11 11 Sale 2020 will hold in …
11.11 shopping festival နို၀င်ဘာလတွင် Shopဟာ တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ အကြီးမားဆုံးနှင့်မယုံနိုင်လောက်အောင်ရောင်းအားအကောင်းဆုံးဖြစ်သည့် ၂၀၂၀၊ ၁၁.၁၁ ကမ္ဘာအကြီးဆုံးအွန်လိုင်းစျေးရောင်းပွဲကြီးကို ကျင်းပပြုလုပ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ ၁၁ရက်နေ့ဟာ တရုတ်နိုင်ငံ၏ Single …